Somaliland oo War cad kasoo saartay Doorashada Somaliya. "Somaliland waxay ka digaysaa khiyaaliga.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maamulka Somaliland ayaa war cad kasoo saaray Doorashooyinka Soomaaliya, waxayna u caddeysay in beesha caalamka inaysan wax shaqo ah ku lahayn Doorashadaasi.
Somaliland waxa ay ku war gelinaysaa Qarammada Midoobay. Midawga Africa, Midawga yurub, iyo guud ahaan bulshada caalamka, in Jamhuuriyadda Somaliland tahay dawlad madax bannaan oo aan haba yaraatee wax shaqo ah ku lahayn nidaamka doorashooyinka maamulka fadhiidka h ee soomaaliya.
Jamhuuriyada Somaliland waxa ay 18-kii may 1991, la soo noqotay gobonimadeedii luntay 1960kii, Soddon sano kadib, somaliland waa dal xor ah oo leh nidaam doorasho oo dimuquraadi ah, isla markaana shacbigu doortaan cidda ku matalaysa golayaasha fulinta (Xukuumadda), sharci dejinta (G/Baarlamaanka) iyo dawladdaha hoose, si xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod ah.
Previous articleFaahfaahin laga helay Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada Marko
Next articleMaxay ka wadahadleen RW Rooble, Madaxda Maamul Goboleeyada iyo Gud. Guddiga Doorashada FEIT?.
Kuraastii ugu danbeysay Aqalka Sare oo lagu doortay Kismaayo (Akhriso magacyada)